Elinye lamakhasimende ami lithuthele iwebhusayithi yabo kwi-akhawunti yokubamba ngobuningi. Babuyekeze izilungiselelo zesizinda sabo se-DNS kumarekhodi e-A ne-CNAME kepha bebenesikhathi esinzima sokunquma ukuthi ngabe isiza besixazulula i-akhawunti entsha yokubamba noma cha (ikheli elisha le-IP).
Ikheli le-IP elibuyisiwe futhi eligcinwe kunqolobane uhlelo lwakho lwasendaweni aluhlukile kuwebhusayithi eyodwa. Umgcini angaba nenqwaba noma ngisho namakhulu amawebhusayithi aphethwe ekhelini elilodwa le-IP (imvamisa iseva noma iseva ebonakalayo). Ngakho-ke, lapho isizinda sakho siceliwe kukheli le-IP, umphathi wakho uthumela isicelo sakho endaweni ethile yefolda ngaphakathi kweseva bese wethula ikhasi lakho.
Uma ubona ikheli le-IP likhonjiswe kahle kuyo yonke iwebhu futhi isiza sakho asikabonakali, ungadlula futhi kumaseva we-Intanethi bese utshela isistimu yakho ukuthi ithumele isicelo ngqo ekhelini le-IP. Ungakufeza lokhu ngokubuyekeza ifayili lakho le-Host futhi usebenzise i-DNS yakho. Ukuze wenze lokhu, vula iTheminali bese uthayipha:
Ukugcina ifayela, cindezela lawula-o kukhibhodi yakho bese ubuyela ukwamukela igama lefayela. Phuma kusihleli ngokucindezela ukulawula-x, okuzokubuyisela kulayini womyalo. Ungakhohlwa ukufaka i-cache yakho. Uma isayithi lingaveli kahle, kungahle kube yinkinga yendawo kumphathi wakho futhi kufanele uxhumane nabo ubazise.
Ngokulandela lezi zinyathelo, ngikwazile ukuqinisekisa ukuthi engikufake ku-DNS kumbhalisi kusesikhathini, okufakiwe kwe-DNS ku-Intanethi kwakusesikhathini, inqolobane yami ye-DNS ye-Mac isisesikhathini, futhi i-DNS yomsingathi wewebhu ibisiphezulu kuze kube manje… kuhle ukuhamba!